Madaxweynaha Puntland oo faah-faahiyey khasaaraha ka dhashay daadadkii Qardho – Geelle Magazine
Madaxweynaha Puntland oo faah-faahiyey khasaaraha ka dhashay daadadkii Qardho
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu faah-faahin ka bixiyey Khasaaraha ka dhashay daadadkii dhawaan ku rogmaday Magaalada Qardho ee Xarunta Gobolka Karkaar ee Puntland.
Madaxweyne Deni ayaa waxa uu marka hore sheegay in daadadkii ku rogmaday Qardho ee ka dhashay Roobabkii mahiigaanka ahaa ee halkaas ka da’ay ay ku dhinteen 8 ruux oo shacab ah, isagoona tacsi u diray Ehelada iyo Qaraabadii ay dadkaasi ka baxeen.
Madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in daadadka Qardho ay ku barakaceen 3,540 qoys, isla markaana ay burburiyeen 750 Guri, sidoo kalena ay ku baaba’day kun iyo labaatan Goobo Ganacsi ah oo ku yaallay Suuqa Magaaladaasi.
Isaga oo sii hadlaayey ayuu sheegay in Qardho lasoo gaarsiiyey gurmad fara badan oo isugu jiray Raashin, Daawo iyo Agabyo kala duwan oo loogu talagalay dadkii waxyeelada soo gaartay, isla markaana la gaarsiiyey 60 kun iyo 20 qoys oo shacab ah.
Madaxweynaha ayaa ka mahadceliyey sida Dowladda Federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba ay uga qeyb qaateen gurmadka loo sameeyey dadkii waxyeeladu kasoo gaartay daadadkii ku rogmaday Qardho.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay xaaladda Cudurka halista ah ee Coronavirus, isaga oo sheegay in Cudurku uu yahay khatar oo aan daawo laheyn, isla markaana looga baahan yahay in feejignaan dheeraad ah laga galo.
Sidoo kale Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu walaac fara badan ka muujiyey Cudurka iyo Kiisaskii dhowrka ahaa ee laga helay deegaanada Maamulka Puntland, wuxuuna ka tacsiyadeeyey dhamaan dadkii Soomaaliyeed ee u dhintay Cudurkaas.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland ugu baaqay in ay qaatan tallooyinka Caafimaad oo ay jeedinayan howl-wadeenada Caafimaadka, kuwaasi oo la xiriira ka hortagga faafitaanka Cudurka Coronavirus.
Faah-faahino dheeraad ah oo kasoo baxeysa diyaaraddii ku dhacday Berdaale